Faroole oo xariga kajaray madaxtooyada cusub ee Garowe +Sawirro – SBC
Faroole oo xariga kajaray madaxtooyada cusub ee Garowe +Sawirro
Posted by Webmaster on April 15, 2013 Comments
Madaxwaynaha puntland cabdiraxmaan faroole ayaa galinkii dambe ee maanta xariga kajaray xarunta cusub ee madaxtooyada puntland .
Munaasibadii maanta xaraga lagaga jaray xarunta cusub ee madaxtooyada waxaa iyana kasoo qayb galay oo goob joog ahaa madaxwayne kuxigeenka puntland Cabdisamad Calai Shire,Gudoomiyaha Barlamanka Cabdirashid Maxamed Xirsi ,wasiiro ,xildhibaano ,taliyaasha ciidamada ,culimo ,aqoonyahano ,haween ,dhalinyaro iyo saraakiisha safaarada Ethiopia iyo hayadaha Qaramada Midoobey.
Madaxweynaha Puntland ayaa khudbad ka jeedshey madasha uu kaga hadlayey waxqabadka xukuumadiisa iyo mashaariicda haatan ay wadaan sida xarunta madaxtoyada oo la dhamaystirey ,xarunta warbaahinta Puntland oo gabogabo ah ,dhismaha garoomada diyaaradaha Bossaso iyo Garowe oo dhowaan la bilaabayo.
Waxa sidookale madaxwayanaha puntland uu sheegay in amaanka puntland uu yahay xiligaan mid wanaagsan layskuna halayn karo isagoona uga mahadceliyay adkaynta dhanka amaanka ee deeganada puntland ciidanaka oo uu kutilmaamay in ay yihiin kuwo naftooda u biimeeyay adkaynta amaanka.
Dhamaan iyana madaxdi kasoo qayb gashay furitaanki xafladaasi ayaa umahadceliyay madaxwayanah dowlada puntland cabdiraxmaan faroole iyagoona uga mahadceliyaya dadaalka dheer ee uu layimi madaxwayanaha puntland waxana ay kubogaadiyeen in halkaasi uu kasii wado dadaalkaasi